We She Me: သားလေး ဖွားစဉ်က (၄)
မဇနိ - 6/4/08, 12:20 AM
ပြောတဲ့လူကတော်တာလား၊ အရေးကောင်းတာလား မသိတော့ဘူး။ အသေးစိတ်ရေးထားတယ်။ ရှေ့မှာမြင်နေရသလိုပါပဲ။ အစ်မက အတော်ကံကောင်းတယ်။ အနားမှာအားပေးမယ့်သူရှိနေတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုအစပျိုးခဲ့ရလဲဆိုတာ ပိုနားလည်လာရတယ်။ သမီးလေးကလည်း ပိုပိုချစ်စရာကောင်းလာပြီ။ တယောက်ထဲနေရတဲ့ကျွန်မအတွက် WeShwMeမှာ ကလေးလေးပုံလေးတွေကို လာငေးရတာ အဖော်ရသလိုပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
War War - 6/4/08, 2:53 AM
Hote pa. ma Zani pyaw tha lo pe. yay tar kaung loon loet read yin ne yote shin kyi nay ya tha lo ko phyit lar tal.5ko wait ya own hmar pot lay.
Andy Myint - 6/9/08, 12:35 AM
နှစ်ယောက်စလုံး တော်တာ မဇနိ... ဟဲဟဲ။